दाङमा माछा मार्न खाेज्दा वम विस्फाेट भएर एक वडा सदस्यका दुवै हातका पञ्जा गुमे
फागुन २१, दाङमा
दाङमा माछा मार्न खाेज्दा वम विस्फाेट भएर एकजना जनप्रतिनिधिका दुबै हातका पञ्जा गुमेका छन् ।
बारुद बलाष्ट गराएर बबई गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा सदस्य ३५ बर्षीय कमल घर्तीले आइतवार दिउँसो स्थानीय बबई नदीमा माछा मार्ने खोज्दा त्यो विष्फोट हुँदा उनका दुबै हातका पञ्जा चुडिएका छन् । त्यस्तै विष्फोटवाट उनकाे घर्तीमा गम्भीर घाउ लागेको र्इलाका प्रहरी कार्यालय हापुरेका प्रमुख प्रयाग नारायण चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
उनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन । बारुद बलाष्ट हुँदा वडा सदस्य घर्ती गम्भीर घाइते भएको खबर आएपछि आफुहरु आइतवार बेलुका ६ बजे बबई नदीको भालुखोलास्थित घटनास्थल पुगेर घर्तीको उद्धार गरि राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर उपचारका लागि पठाएको ईप्रका हापुरेका सैइ चौधरीले बताए ।
घाइते वडा सदस्य घर्तीलाई राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर दाङको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि राति नै नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । वडा सदस्य घर्तीले माछा मार्न खोजेको बबई गाउँपालिका वडा नं. १ को क्षेत्र बाँके निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछ । त्यहाँ माछा मार्न पाइदैन ।
सल्यानमा हाेम आइसाेलेशन बसेका दुई काेराेना संक्रमित महिलाकाे मृ’त्यु